ခုနစ်စဉ်ကြယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ခုနှစ်စင်ကြယ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
'ခုနစ်စဉ်ကြယ်ပြောင်၊ အမြီးထောင်၊ သန်ကောင်ချိန်သို့ ရောက်'၊ ဟု ရှေးလူကြီးများသည် ခုနစ်စဉ်ကြယ်နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ဆိုစမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ခုနစ်စဉ်ကြယ်ကို ညအချိန်တွင် မြောက်ဖက် ကောင်းကင်၌ ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်ပေးသည်။ ခုနစ်စဉ်ကြယ်မှာ အနောက်တိုင်းနက္ခတ်ဗေဒ ဆရာများအလို အားဖြင့် အာစာမေဂျာခေါ် နက္ခတ်ထဲတွင် ပါဝင်သော ကြယ်စု ပင် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုကြယ်စုတွင် ကြယ်အလုံးပေါင်း ၇ လုံး ပါဝင်သောကြောင့် ခုနစ်စဉ်ကြယ်ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
အာစမေဂျာနက္ခတ်အနီးတွင်ပင် အာစာမိုင်းနားခေါ် နက္ခတ်တစ်ခု ရှိသေးသည်။ အာစာမေဂျာနှင့် အာစာမိုင်းနား ဆိုသည်မှာ လက်တင်ဘာသာစကားများ ဖြစ်ကြ၍ ဝက်ဝံကြီး၊ ဝက်ဝံငယ်ဟူ၍ အသီးသီး အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ထိုနက္ခတ် များထဲတွင် ပါရှိသော ကြယ်လုံးများကို တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး ဆက်စပ်ကြည့်တတ်လျှင် ဝက်ဝံရုပ်နှင့် အနည်းငယ်တူသော ပုံသဏ္ဌာန်ကို မြင်ရသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုနက္ခတ်များသည် အဘယ်ကြောင့် ဝက်ဝံများနှင့် တူရကြောင်း စပ်လျဉ်း၍ ရှေးဟောင်းဒဏ္ဍာရီများ ရှိလေသည်။ အာစာမိုင်းနားနက္ခတ်ထဲတွင် ပါသောကြယ်များကို ပုံဖော် လျှင် အမြီးထောင်နေသော ဝက်ဝံတစ်ကောင်၏ ပုံသဏ္ဌာန် ထင်ပေါ်သည်။ သို့ရာတွင် အာစာမေဂျာနက္ခတ်တွင် ပါဝင်သော ခုနစ်စဉ်ကြယ်မှာမူ ဝက်ဝံတစ်ကောင်၏ အမြီးနှင့် ကိုယ်အစိတ် အပိုင်းအချို့ကိုသာ ပေါ်လွင်စေသည်။ ခုနစ်စဉ်ကြယ်၏ တည်နေပုံမှာ ထယ်ပုံနှင့် တူသည်။ ထယ်လက်ကိုင်ရိုးနှင့်တူသော အပိုင်း၌ ကြယ် ၃ လုံး ရှိသည်။ ကျန်လေးလုံးမှာ ကြယ် ၃ လုံးထိပ်၌ ကန့်လန့်ဖြတ် လုံးစီတွဲ လျက် ၂ တန်းရှိသည်။ အစွန်ဆုံးကြယ် ၂ လုံးတွဲအတန်းမှ ရှေ့သို့ မျဉ်းဖြောင့်တစ်ခုကို ဆွဲလိုက်လျှင် ထိုမျဉ်း၏ အဆုံး၌ တစ်လုံးတည်း တောက်ပနေသော ကြယ်ကြီးကို မြင်ရလိမ့်မည်။ ထိုကြယ်ကြီးမှာ ဓူဝံကြယ်ပင် ဖြစ်သည်။ ဓူဝံကြယ်သည် အာစာမိုင်းနားနက္ခတ်တွင် ပါရှိ၍ ဝက်ဝံ၏ အမြီးနှင့်တူသော အပိုင်းတွင် အမြီးထိပ်ဖျား၌ တည်ရှိပေသည်။
မြောက်ဖက်ကောင်းကင်ပြင်ရှိ ကြယ်တာရာများသည် ဓူဝံကြယ်ကို လှည့်ပတ်၍ နေသဖြင့် ခုနစ်စဉ်ကြယ်သည်လည်း အလားတူပင် အချိန်နာရီနှင့် ရာသီဥတုအလိုက် ရွေ့လျား ပြောင်းလဲ၍ နေပေသည်။ ဆောင်းဥတု ညဉ့်ဦးပိုင်းတွင် ထယ် လက်ကိုင်ရိုးနှင့်တူသော ကြယ် ၃ လုံးတန်းသည် တောင်ဖက် သို့ ညွှန်၍နေသည်ကို တွေ့မြင်ရပေမည်။ နွေကူးဥတု ညဉ့်တွင် မူ ယင်းကြယ်တန်းသည် အရှေ့ဘက်သို့ ညွှန်လျက်၊ နွေဥတု တွင်မူ မြောက်ဘက်သို့ ညွှန်ကာ၊ ဆောင်းဥတုတွင်ကား အနောက်ဘက်သို့ ညွှန်ပြ၍ နေပေလိမ့်မည်။
ဓူဝံကြယ်ကြီးသည် အခြားကြယ်များကဲ့သို့ နေရာ ပြောင်းရွေ့ခြင်းမရှိဘဲ ထာဝစဉ် တစ်နေရာထဲတွင် တည်နေ ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးအခါက သင်္ဘောသားများသည် မိမိတို့ ရောက်ရှိနေသော နေရာကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဓူဝံ ကြယ်ကို ကြည့်၍ ခရီးသွားလာကြရလေသည်။ 
ခုနှစ်စဉ်ကြယ်သည် ကြယ်ခုနှစ်လုံး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကြယ်စုဟု ဆိုသော်လည်း အမြီးစွန်းမှ ဒုတိယမြောက်ကြယ်သည် နှစ်လုံးတွဲနေသောကြောင့် အမှန်စင်စစ် ကြယ်ပေါင်း ရှစ်လုံး ပါဝင်နေသည်။ ရှေးမြန်မာတို့သည် ဤ ခုနှစ်စဉ်ကြယ်ကို မိချောင်း တကောင်အသွင် တွေ့မြင်ခဲ့ကြသောကြောင့် ကြယ်မိချောင်းဟုလည်း ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ခုနှစ်စဉ်ကြယ်တွင် ကြယ်ပေါင်း ရှစ်လုံး ပါဝင်ပြီး မိချောင်းနှင့်လည်း တူသောကြောင့် "ခုနှစ်စဉ်နှင့် ရှစ်စဉ်ကြယ်ကောင်း၊ ကြယ်မိချောင်း၊ ခေါင်းကား ဦးဆောက်၊ မြင့်မိုရ်အောက်သို့ ရောက်ပြီလေ"ဟု ခုနှစ်စဉ်ကြယ်သည် မြင့်မိုရ်နဂါးကြယ်စုရုပ် အောက်သို့ ရောက်ရှိနေပုံကို စပ်ဆိုထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်မည်။
အင်္ဂလိပ်တို့က ခုနှစ်စဉ်ကြယ်ကို ထယ်နှင့် တူသည်ဟု မြင်၍ ထယ်ပုံကြယ် ဟု ခေါ်သော်လည်း အမေရိကန်တို့ကမူ မြန်မာ ၇ ဂဏန်းကဲ့သို့လည်း မမြင်ကြ၊ မိချောင်းနှင့် ထယ်ပုံကဲ့သို့လည်း မမြင်ဘဲ၊ ရေမှုတ်ကြီး၊ ယောက်ချိုဇွန်းကြီး အဖြစ်သာ မြင်ကြသောကြောင့် ရေမှုတ်ကြီး၊ ယောက်ချိုဇွန်းကြီးဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ သင်္သကရိုက် ဘာသာတွင် ခုနှစ်စဉ်ကြယ်ကို ရသေ့ ခုနှစ်ဖော်ကြယ် (သတ္တဣသိ) ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
ခုနှစ်စဉ်ကြယ် အမြီးစွန်းမှ ဒုတိယမြောက်ကြယ်ကို မြန်မာတို့က တနင်္ဂနွေကြယ်ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး၊ အနောက်တိုင်းက မိုက်ဇာဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုသည်။ ထိုမိုက်ဇာနား ကပ်နေသည့် ကြယ်ကလေးကို အနောက်တိုင်းက အယ်လကော ဟု ခေါ်ကာ ဟိန္ဒူတို့ကမူ အရုန္ဓတီဟု ခေါ်သည်။ မိုက်ဇာနှင့် အယ်လကောတို့ကို မြင်းနှင့် မြင်းစီးသူဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။ မျက်မှန်နှင့် မျက်စိ စမ်းသပ်သော ကိရိယာများ မပေါ်ပေါက်သေးမီ ရှေးလွန်လေပြီးသော အခါသမယက အယ်လကောကြယ်ကို မျက်စိ ကောင်းမကောင်း စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်း တမျိုးကဲ့သို့ပင် အသုံးချခဲ့ကြသည်။ အကယ်၍ ထိုကြယ်ကို မြင်ရလျှင် မျက်စိကောင်းသည်ဟု မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။ အယ်လကော ခေါ် အရုန္ဓတီ ကြယ်ကလေးသည် မိုက်ဇာ ခေါ် တနင်္ဂနွေကြယ်နှင့် တလက်မမျှသာ ကွာသည်ကို ဂရုပြုကြည့်ပါက တွေ့မြင်ရသည်။
↑ Holbrook, J. C.; Baleisis, Audra (2008). "African Cultural Astronomy". Astrophysics and Space Science Proceedings. p. 53. Bibcode:2008ASSP....6...53H. ISBN 978-1-4020-6638-2. doi:10.1007/978-1-4020-6639-9_5. |chapter= ignored (help)
↑ "The 1816 Solar Eclipse and the Comet 1811I in Linnell's Astronomical Album" (1992). Journal for the History of Astronomy 23: 121. Bibcode: 1992JHA....23..121O.
↑ John C. Barentine (4 April 2016). Uncharted Constellations: Asterisms, Single-Source and Rebrands. Springer, 16–. ISBN 978-3-319-27619-9။
↑ Big Dipper။ Astronomy Picture of the Day။ NASA (21 April 2013)။
↑ ပေါင်းတည်ဘုန်းကြည် (ပကြိမ်၊ ဩဂုတ်လ-၁၉၈၁). နက္ခတ်ကြည့်ရှုနည်းနှင့် ကြယ်ပုံပြင်များ. ဥဩမြိုင်စာပေ, ၁၃။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခုနစ်စဉ်ကြယ်&oldid=383314" မှ ရယူရန်
၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇၊ ၀၄:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇၊ ၀၄:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။